सेरोफेरो : बा, म स्कुल छाड्दिन
माटोले लिपेको घर । रमाइलो बालापन । बाको ढाडमा बसेर घोडाचढी खेल्थेँ । खेल्छे मात्र, पछि दुख पाउलीस भन्दै आमा गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । बाबा हाँसेर सम्झाउनु हुन्थ्यो, ‘दुःख जति परे पनि पढ्न चाही छाड्नु हुन्न ।’ म बुझे झै गर्दिन्थेँ । उहाँ ठट्टा गरेझै कुरो उप्काउनु हुन्थ्योे, ‘तँलाई डाक्टर, माइलीलाई इञ्जिनियर र कान्छीलाई पाइलट बनाउने हो ।’ यो ठट्टामा चाहना लुकेको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो हुन्थेन । म साथीहरूसँगै स्कुल जान्थेँ । सँगै स्कुल जाने गाउँका दिदीहरू बिस्तारै जान छाडेका थिए । कक्षाहरू जति माथि हे¥यो उती पातलो देखिन्थ्यो । म सोच्थेँ, ‘आखिर साथीहरू स्कुल किन छाड्छन् ?’
माइली बैनी एक वर्षको छँदा नै मामा घर पाल्न लगे । कान्छि बहिनी जन्मी । आमाले आफूलाई सुत्केरी स्याहार्न बहिनी नाता पर्नेलाई ल्याउनु भो । पछि उनी नै बाबाको कान्छि श्रीमतीको भएर भित्रिइन । मन पर्ने बा कताकता मन बिझाउने हुनुभो । ‘बा कोसँग बस्ने ?’ यो कुराले दुई आमा बीच सधैं लुछालुछ हुन्थ्यो । छुट्टाउन नसकेपछि रुँदै पिँढीको कुनामा डल्लो पर्थेँ म ।
म आठ वर्षकी हुँदा । मेरा ३० वर्षे बा एक्कासी बिरामीले गल्नु भो । उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइयो । क्षयरोग लागेछ । धेरै खर्च भो । थला परेर पिढीँमा धेरै दिन सम्म लड्नु भो । बिस्तारै बाको मायाले मेरो केटाकेटी मन फर्कियो । २०६० साल, असोज । रातको दश बजेतीर । केही छिमेकीहरू कुरुवा बस्दैथिए । म माथिल्लो तल्ला भान्छामा पल्टेकी थिएँ । पानी दर्कन, आकाश कराउँदै थियो । एक्कासी मान्छेहरू रोएको आवाज सुनेर ब्युँझिएँ । मन निक्कै आत्तियो । तल झर्न दिएनन् । आँटीको झ्याल खोलेँर चिहाएँ । पिढीँ टिनले छाएको थियो । भित्तामा जोडिन नसकेको टिनको चरबाट मैले मधुरो उज्यालोमा लम्पसार परेर सुत्नुभएको बा देखेँ, उहाँ बित्नु भएछ । झ्यालमै बसेर खुब रोएँ । मेरो सानो रुवाइँ दर्केको पानीको ठूलो आवाजसँगै हरायो, कसैले पत्तो पाएन ।
बाको उपचारको ऋण तिर्न घरको सुन, टिभी, गाउरी ताउला बेचेर सक्किए । बा बितेको केहि महिनामै आमामाथि अर्कै केटासँग लागेको आरोप लाग्यो । हातपात सुरु भयो, ठूल्बाबाट । उनी रक्सिले मातेर आमालाई कुट्थे । बलेको आगो ताप्नेहरू, निभेको खरानी के खोस्रन्थे ? मैले बुझेँ, बिधुवा भएर बाँच्नु निक्कै गाह्रो रैछ । एक रात, ज्यान जोगाउँदै आमा बारी बारी भाग्नु भो । फर्कनु भएन । सौतेनी आमाको साथ । स्कुल भन्दा बढी घरको काम ध्यान दिनु पर्ने । घर स्याहार्देमा स्कुल जान भ्याइएन । मैले बल्ल बुझेँ, ‘साथीहरू स्कुल किन छाड्छन् ।’
बाबाले भन्नुभाको कुरा मनमा थियो, ‘स्कुल छाड्नु हुन्न ।’ घर छाडेर भाग्ने सोच आयो । कहाँ जाने ? मामाघर सम्झेँ । लुकाइलुकाइ झोलाहरूमा केही बाबाका सम्झना, केही आमाका सम्झना कोचारेँ । तीन झोला भयो । एक दिन ९ वर्षे म । ५ वर्षे कान्छि बैनीलाई अघि लगाउँदै । हातेपाते झोला बोकेर सुटुक्क घर छाडेँं । मिल्थ्यो भने घर पनि बोकेर लैजान मन थियो, मेरो प्यारो घर । म हुर्केको घर ।
मामाको घर, हजुरआमाको साथ । घरगोठ पनि भ्याउनु थियो । काम गर्दै पढन थाल्यौं । एकाएक हजुरबा बित्नु भो । खबर पुगेछ क्यारे, आमा आइपुग्नु भो । आमाले बा गुमाउनु भथ्यो । हामीले पनि बा गुमाइसकेका थियौं । आमाले आफ्नी आमालाई भेट्टाउनु भो । हामी तीन छोरीले पनि आफ्नी आमालाई भेट्यौं । फेरि माउ भेटेको चल्ला झै भयो घर ।
दुई वर्ष पछि । एक दिन काठमाडौं घुम्न जाऊँ भन्दै आमाले म र माइलीलाई यहाँ ल्याउनु भो । माइली ठमेलको एक घरमा काम गर्दै पढ्न थाली । म आमासँगै बस्न थालेँ । गाउँमा ५ पढेर के गर्नु, यहाँ ३ मा भर्ना हुन पाएँ । पढ्दै र बुझ्दै पनि गएँ, ‘आमाको पनि अर्को बिहे भैसकेको रै’छ ।’ कान्छी आमा देखेको थिएँ । कान्छा बाउ पनि भोगेँ । उनी मलाई देखि सहँदैनथेँ । म परिवार बिग्रनुको कारण बन्न थालेँ । घरमा नयाँ भाइ जन्मेको थियो । आमा, भाइ र म केही समय उनीसँग छुट्टीएर बस्यौं । फेरि आमालाई उनी लिन आए । जानु अघि आमाले मलाई एउटा आन्टीको घरमा काम लगाइदिनु भयो, सिनामंगलमा । एक्लै डेरामा बस्नु । आन्टीको घरमा सघाइदिनु । कहिलेकाही क्याटरिङको काममा हिड्नु । नजिकैको शारदा उच्च माविमा पढ्न जानु मेरो दैनिकी भयो ।
१७ वर्षे म ऐले कक्षा १० मा पढ्छु । हरेक विहान ५ बजे उठ्नु । आन्टिको घरमा सघाउन जानु । बिहान साढे ६ बजे कोचिङ । साढे नौ बजे फेरि कोठामा पुग्छु । सके पकाउँछु नसके आन्टीको घरमा खान जान्छु । दिनभरी स्कुल हुन्छ । सकेसम्म खाजा नखाइ बस्छु । साँझ आन्टीकहाँ फेरी सघाउन जान्छु । महिनाको १५ सय पाउँछु । यतिले खर्च धानिँदो रहेनछ । स्कुल फि त लाग्दैन तर, कोठा भाडा, लुगाफाटो, खानाखाजा, ट्युसन खर्च । यति धेरै खर्च भने जुटाउनु पर्छ । भर्खरै अर्को ठाउँमा लुगा धुने काम पनि सुरु गरेँ । थोरै जुर्छ । न खर्च पु¥याउन सक्छु, न राम्ररी पढ्ने समय । तै पनि साँझ समय मिलाएर पढ्दैछु । बा, तपाईको सपना, म डाक्टर बन्न सक्छु सक्दिन थाहा छैन । तर, नर्सिङ पढ्ने इच्छा छ । जसले हामीलाई बेघर बनायो । उनीहरूको अघि केहि बनेर देखाउने इच्छा छ । बरु रातदिन अरुकहाँ काम गर्छु, बिहान जस्सै किताब समाउँछु । तपाई ढुक्क हुनुस बा ‘म स्कुल छाड्दिन् ।’
मसँग पढेका धेरैले स्कुल छाडे । मैले छाडिन्, बरु भोगेर जानेँ, ‘साथीहरू किन बीचैमा स्कुल छाड्छन भन्ने ।’
बरु रातदिन अरुकहाँ काम गर्छु तर बिहान जस्सै किताब कापी बोक्छु । तपाई ढुक्क हुनुस बा ‘म स्कुल छाड्दिन् ।’
(Published in Nagarik, 14 Sep 2013)